Dedicated Semalt Dashboard သည်သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်ပုံ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့အားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသည့် smart tools များအပေါ်တွင် ပို၍ မှီခိုနေရသည် ကြီးမားသောအငယ်စားအဖွဲ့အစည်းများသည်တူညီသောကစားကွင်းတွင်ရှိခဲ့သည့်အခါတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖိုင်တွဲများနှင့်ဂဏန်းတွက်စက်အချို့ကိုပေါင်းစပ်။ အလုပ်လုပ်ကြသောအခါနည်းပညာကိုရှေ့ဆက်သွားရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုအတွက်မှန်ကန်သောကိရိယာများကိုရှာဖွေရန် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ အင်တာနက်ခေတ်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးမေးခွန်းများအတွက်အဖြေအားလုံးနီးပါးကိုသုညများနှင့်တစ်ခုကြားတွင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်ကြီးမားသောဒေတာများ၌အလိုအလျောက်နှင့်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်သောကိရိယာများသည်အောင်မြင်မှုနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုတို့၏ခြားနားချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
နှင့်မကြာသေးမီက Semalt ထိုကဲ့သို့သော tool ကိုတီထွင်ခဲ့သည်; သင်၏စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်မှုဆီသို့ ဦး တည်စေမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ကြည့်ရအောင် ဆက်ကပ်အပ်နှံ Semalt Dashboard ကို Semalt ၏ SEO ချဲ့ထွင်သောစိတ်ကိုတီထွင်ခဲ့သောကိရိယာအသစ်တစ်ခုသည်သင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအား Semalt ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။
Dedicated Semalt Dashboard ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Dedicated Semalt Dashboard သည်ပစ္စည်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Semalt ၏စျေးကွက် ဦး ဆောင်မှုဆိုင်ရာ SEO နည်းပညာကိုလူအများထံသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် SEO စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းရန်အဖြူရောင်တံဆိပ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။
Dedicated Semalt Dashboard သည် Ubersuggest, Ahrefs နှင့်သင်ဖော်ပြရန်ဂရုပြုရမည့်အခြားအဆင့်မြင့် SEO tool များကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ဆင်တူသည်။ ခြားနားချက်ကတော့အဲဒါဟာသင့်အတွက်ဖြစ်တယ်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ အရောင်များနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို DSD တွင်ထည့်နိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် ၁.၅ သန်းခန့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်သန်းတစ်ဝက်ကျော်ကိုကူညီရန်သုံးသော SEO နည်းပညာများကိုတီထွင်ရာ၌ Semalt ၏ဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံကကျောထောက်နောက်ခံပြုသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာ (SERP) အချက်အလက်များ: သင်၏ဖောက်သည်များအား၎င်းတို့၏လက်ရှိ SERP အဆင့်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်စာမျက်နှာများ၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ပြိုင်ဘက်ခြေရာခံခြင်းကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုသည်။
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: သင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမည်မျှကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ထားသနည်း။ ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ သူတို့သည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ SEO လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန်ကူညီလိမ့်မည်။
စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ဒီ tool သည် SEO အမြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်, စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကိုပြိုကွဲစေသည် (client ကိုသင်တို့အဘို့အလာကြလိမ့်မည်) ။
အကြောင်းအရာထူးခြားမှုစစ်ဆေးခြင်း - Plagiarism သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်သင်၏ SEO အားထုတ်မှုအတွက်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိရိယာသည်ဖောက်သည်၏ site ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။
အထက်ပါကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သင်၏ client သည်ဒေတာအတော်အတန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်များကိုလက်တွေ့ကျသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်အစာကြေရန်လွယ်ကူသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းသည့်အစီရင်ခံစာစင်တာ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာများကို DSD အတွင်းကြည့်။ ဖြစ်စေ၊ တင်ပို့နိုင်သည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့လိုဂိုကိုထည့်သွင်းထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကသူတို့ SEO ရှာဖွေမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လာတဲ့အခါသင်ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေမှာပါ။
အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသည်အစီရင်ခံစာများအတွက်သာမဟုတ်ပါ - DSD ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကိုသင်၏စီးပွားရေးအတွက်တံဆိပ်ကပ်ထားသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အတူ DSD မှာ -
သင်ရွေးချယ်ထားသောစိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းတစ်ခုအောက်တွင်ထားရှိခြင်း (ဥပမာ www ။ [business] SEOtool.com) ။
သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်နှင့်အတူလူ ဦး ရေ။
Google Maps တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာတစ်ခုဖြင့်စာရင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အားလုံးခြုံကြည့်လျှင် DSD သည်သင်၏ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်ဟု client တစ်ခုကလက်ခံလိမ့်မည်။
စိတ်ကြိုက်နေရာချခြင်း: အင်္ဂလိပ်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ပထမဘာသာစကားမဟုတ်ပါကရုရှား၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဒတ်ခ်ျ၊
လက်ငင်းစာတိုပေးပို့: DSD သည်သင်၏ဖောက်သည်များအားလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်သင့်အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသည်။ အရောင်းပြုလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ ရိုးရှင်းပါသည်။
အီးမေးလ်အသိပေးချက်များ: DSD သည်သင်၏ပုံမှန်အားဖြင့်အစီရင်ခံခြင်း (သို့) မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူသင်၏ client client အီးမေးလ်အကြောင်းကြားချက်များကိုသူတို့ SEO ပိုမိုအာရုံစိုက်လာရန်သေချာစေနိုင်သည်။
DSD သည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် SEO ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ DSD မှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိသောအဖွဲ့အစည်းများတွင် -
SEO အေဂျင်စီ လူတိုင်းသည်အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူမယုံနိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံဖန်တီးရန်အတွက်သီးသန့်၊ အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာတစ်ခုပေးနိုင်ရန်စိတ်ကူးထားပါ။
အလွတ်တန်း SEO မန်နေဂျာ: တစ် ဦး တည်းသောအော်ပရေတာတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်တွင်အေဂျင်စီတစ်ခု၏အရင်းအမြစ်များရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် DSD ဖြင့်အဆင့်မြင့် SEO ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ (ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာပါမည်) ။
Semalt ပြန်လည်ရောင်းချသူများ: Semalt ပြန်လည်ရောင်းချသူများအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ထုတ်ကုန်အစုံအပြင်ထူးခြားသည့်အဖြူရောင်တံဆိပ်တပ်ထားသော dashboard ကိုရရှိသည်။ ပြန်လည်ရောင်းချသူများသည်SDဝံဂေလိဟောပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်နေစဉ် DSD ကိုခံစားနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် DSD ကမည်သို့ကူညီမည်ဆိုသည့်မေးခွန်း၏အဖြေကိုနားလည်ရန်ဤဆောင်းပါးသည်ယခုအချိန်တွင်အားစိုက်ထုတ်နေသောစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာနားလည်ရမည်။
high-end SEO tool တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအတွက် back-end analytics မှသည် front-end website နှင့် user အတွေ့အကြုံအထိဗဟုသုတနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ SEO တွင်ပါ ၀ င်သူမည်သူမဆို၎င်းသည်နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာတည်ရှိနေသော algorithms များနှင့်အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေသောတိုးတက်မှုနယ်ပယ်ကိုသိသောကြောင့်သင်သည်လည်းသင်မည်သည့်အခါမျှမပြုလုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကိရိယာများကိုအစဉ်အမြဲ update လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Ubersuggest သို့မဟုတ် Ahrefs ကဲ့သို့သောကိရိယာတခုကိုဖန်တီးရန်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးပြုလုပ်မည်နည်း။ $ 100,000? ဒေါ်လာ ၁ သန်းလား။ နောက်ထပ်?
သတင်းကောင်း ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာမျိုးကိုသင်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် DSD သည်သင့်အတွက်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည် - သင်ပြီးဆုံးသွားသောအဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းထည့်သည်။ ပြီးတော့ဒီကိရိယာကိုသင်ရရှိနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံး back-end နှင့် front-end နည်းပညာကိုဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့်ရနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒေါ်လာ ၁၀ ။ ပြီးခဲ့သည့်ညညနေခင်းတွင်သင်သုံးစွဲခဲ့သည့်ပမာဏ။
ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် DSD ကမည်သို့ကူညီနိုင်သနည်း။
ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့မေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ သင်၏ SEO လုပ်ငန်းတိုးတက်ရန် DSD ကမည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။ နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုကြည့်ကြရအောင်။
သင့်ဖောက်သည်များအားအဆင့်မြင့် SEO ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာကိုအခမဲ့ပေးကမ်းနိုင်သည့်စွမ်းအားကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
DSD သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောသံလိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာ၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်သည်။ သင်၏ DSD သည်သင်၏ဖောက်သည်ပမာဏကိုသိသိသာသာကြီးထွားစေနိုင်သည်
အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့် DSD သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအားတရားဝင်ဖြစ်ခြင်းကို SEO တီထွင်သူနှင့်အတွေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း - သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ ပေး၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖောက်သည်များပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
SEO ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလက်ချောင်းထိပ်များဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏အရေးကြီးမှုနှင့်သူတို့အောင်မြင်ရန်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုသတိထားမိလိမ့်မည်။ DSD မှရရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်သူတို့၏ SEO အခြေအနေကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ အဘယ်အရာသည်အလုပ်လုပ်သည်၊ အဘယ်အရာမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ပြtheနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
SEO အေဂျင်စီတစ်ခုသို့မဟုတ်အလွတ်တစ်ခုလုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောပြုပြင်ခြင်း၏အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ယင်း၏အရေးကြီးမှုကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ DSD သည်၎င်းအတွက်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအအေးခံအရောင်းအအေးများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏လိုဂိုနှင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို tool တစ်ခုလုံးတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး DSD မှမီးမောင်းထိုးပြသည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ DSD မှ Semalt analytics အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းအားနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
သင်က tool ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်အစကဖောက်သည်တွေရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုမြှင့်တင်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ DSD ၏ ROI
SEO သည် ၀ င်ရောက်ရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်မလိုအပ်သကဲ့သို့၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရှာဖွေရေး algorithm ကိုလည်းကောင်း၊ SEO ၏ကမ္ဘာကိုအပြည့်အဝနားမလည်သောဖောက်သည်များနှင့်လည်းကောင်းယှဉ်ပြိုင်ရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
DSD သည်ဤမျက်နှာစာတစ်ခုစီ၌သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအားအဆင့်မြင့် SEO နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များထက်ရှေ့ကို ဦး တည်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အမြင့်ဆုံးသောနောက်ဆုံးပေါ် SEO နည်းပညာကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ဂူးဂဲလ်နှင့်အတူတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖောက်သည်များအား SEO မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသရန်ကူညီပေးပြီး၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
အားလုံးခြုံကြည့်လျှင် DSD သည်သင်၏စီးပွားရေးဝင်ငွေကိုအကြီးအကျယ်မြှင့်တင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထိုအများ၏စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းသည် $ 10။
DSD အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ rundown တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ။